Muiti waMaki Ane Zvemagariro Pasi Pebhari - Mamwe Mvura Yemubazi, Ndapota! | Martech Zone
Ini ndangobva kuverenga chinyorwa pamusoro pa Chechi yeMutengi, yakanyorwa naJackie Huba naBen McConnell (vaviri vevanhu vakangwara kwazvo mune iri bhizinesi), maererano nehoopla pamusoro Mucherechedzi weMaker. Muiti waMako ndechimwe chiratidzo pasi pemuraira we Beam mhuri yezvigadzirwa.
Kunyangwe shamwari yedu uko kuRaidious, Dodge Lile, vakapindirana nekumwe kucherechedza. Zvinotaridza kuti Mugadziri Mako anga afunga kudzikisira chigadzirwa chavo kutambanudza chiverengero chiri kuenderera, uye nokudaro chichiwana chinowedzera kudiwa. Kuzvidzora kwakasangana neMark's Mark brand kuburikidza nekugovana sarudzo iyi kuburikidza newebhusaiti yavo, uye nzira dzekudyidzana dzaive, horaiti, regai tingoti ndingadai ndichinwa bourbon yakawanda nguva pfupi yapfuura dai ndaive Rob kana Bill Samuels.
Nedzidziso zhinji dzandakaverenga, iyo Mugadziri Maka Yemagariro Kirabhu parizvino inoratidzwa semuponesi, seyakarurama kosi inogadzirisa, kana makwara ekuvharira mune zvisingafungidzirwe zvisarudzo zvakaipa. Asi ini ndine akati wandei ekuwedzera makomendi, maonero, uye mazano. Muiti waMaki anonyanya kusvika pakuziva kuti kune mhando, uyezve zviripo pezvitsiga.
Zvizhinji zvezvigadzirwa mukati mechigadzirwa portfolio paBeam zvirokwazvo hazvingasviki pakuwongorora kwakadai panogadziriswa. Asi zvakadiniko naLaphroaig? Ardmore? Courvoisier? Zvese izvi zvakare Beam marangi. Ini handikwanise kufunga nezve inopisirwa, yakapusa pfungwa sarudzo pane yekudyidzana nezvigadzirwa zvakamira muyedzo wenguva. Asi mira, musika unoziva nezve shanduko kune izvi zvigadzirwa pamusoro pemakore? Pane shanduko dzakaitwa pasina kuzivisa mutengi here? Handina chokwadi nazvo.
Pfungwa yangu ndeiyi. Paunenge uchinge uine brand, chigadzirwa, icho iwe semubatsiri unonzwisisa kuve chinenge chitsvene, unoita shanduko huru kwachiri, pasina kudyidzana uye mhinduro kubva kumutengi? Zvizhinji zvezvigadzirwa zvikuru zvichave neakavimbika zvichitevera kwenguva refu mushure mekunge vatengesi vekutengesa nemauto avo evashandi nyuchi vaenderera kune zvigadzirwa zvitsva, kumakambani matsva. Apa ndipo panotadza mabhurugwa mazhinji mumabatiro avanoshandisa vachishandisa vezvenhau.
Vanotarisa pasocial media se imwe chete chiteshi, Pasina kuvaka kunze kwenzvimbo yevatsigiri vechiratidzo vanobatirana kuti vashande pamwe neiyo mhando. Iwe haugone kuita izvi kuburikidza neTwitter neFacebook chete, uye nekuvaka hukama hwakasimba uye hunobatsira. Chokwadi, mapuratifomu eruzhinji anogona kushandiswa senzira dzekutaurirana dzemunharaunda, asi zvakakosha kuvaka dura rakasimba, rakanangana neboka rinotarisa kana uchida, uye shandisa izvi senzvimbo yekudyidzana. Izvi zvakafanana here nekuunganidza vanhu? Kure nazvo. Mucherechedzo wako une zano shoma rekuti ndiani ari muboka revanhu, uye ndeapi mavara avakapfeka.
Dambudziko reBourbon rinotaridzawo chimwe chezvinhu zvitsva zvakakosha zvekushambadzira muzana ramakore rechi21. Kushambadzira hakusipo mune yekushambadzira, yakatorwa kubva kumahoro ekutungamira kwechigadzirwa, rutsigiro rwevatengi, uye Executive suite. Inofanirwa kunge iri padhuze nesarudzo dzakakosha dzinokanganisa iyo brand, chero kupi iko chiratidzo chiri kusangana nemutengi. Ichi ndicho chivimbiso chaicho chekuti magariro anogona sei uye anofanirwa kushandiswa, nekuti zvipingamupinyi zvaimbove zviriko zvino hazvina kukosha. Nekudaro, isu hatifanire kutarisa kune zvese zvinhu zvemagariro semutyairi kumashure kwesimba iri. Uye kuita neimwe nzira kuve wakanyanya kupindura munhandare yenyika ine hukama. Muiti waMako akamanikidzwa chaiko kukona, uye yakaisa timu yekutengesa yeBeam munzvimbo inoita kunge inopesana nekodhi yavo yekutengesa.
Kushambadzira uye kushambadzira kunofanirwa: "Ratidza chete ruzivo rwechokwadi pamusoro pesimba redoro uye usasimbise simba redoro sehunhu hwakanaka hwechigadzirwa." Beam Kushambadzira Kodhi.
Kunyangwe iwe uri waMaki waMaki, kana chero hazvo mhando, tora nguva, uye ita nhamburiko yekuita basa rakaoma kuseri kwezviitiko, usati wavimba nenzvimbo yenzanga kugadzirisa matambudziko ako ese. Uye inwa zvine mutsindo.
Tags: Bhoradanda kushambadziramuchisobrandingvemunharaundajim dandamakers mucherechedzoevanhu vezvenhau
Ini ndinowana nei vaida kuita shanduko, asi yaive yakaipa sarudzo kubva pakutanga. Pandakazvinzwa panhau ndakaseka kumukadzi wangu ndikati "Hongu hazvingashande zvakanaka." uye tarisa .. haina.